Sidee looga Fogaadaa Ismiidaaminta Socdaalka | Martech Zone
Talaado, Juun 5, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Su'aasheena koowaad marka macmiilku noo sheego inay horumarin doonaan degel cusub ayaa ah in kala sarraynta bogga iyo qaabdhismeedka isku xidhka ay is beddelayaan iyo in kale. Inta badan jawaabtu waa haa… waana marka ay baashaalku bilaabmaan. Haddii aad tahay shirkad dhisan oo muddo haysatay, u guuritaanka CMS cusub iyo naqshaddu waxay noqon kartaa tallaabo weyn… laakiin aan dib loo wareejin taraafikada jirta waxay la mid tahay SEO is-dilid.
Gawaarida ayaa ka imaaneysa bartaada natiijooyinka raadinta… laakiin waxaad u horseedday bogga 404. Gaadiidku wuxuu ka imanayaa boggaaga xiriiriyeyaasha loo qaybiyay ee warbaahinta bulshada… laakiin waxaad u horseedday bog 404 ah. Xusuusinta bulshada ayaa tirisa URLkiiba hada soo sheega 0 sababtoo ah barnaamijyada tirinta bulshada sida Facebook jecel, Tweets tweets, saamiyada LinkedIn, iyo kuwa kale waxay keydiyaan xogta ku saleysan URL… ee aad hada bedeshay. Xitaa ma ogaan kartid inta qof ee toos ugu socota 404 bog sababtoo ah bogag badan ha ku soo wargelin xogtaas falanqayntaada.
Waxaa ugu darnaa dhammaantood, awoodda uruurinta ereyga muhiimka ah ee aad dhistay bog kasta backlinks ayaa hadda laga tuuray daaqadda. Google wuxuu ku siinayaa dhowr maalmood si aad u hagaajiso… laakiin markay wax isbeddel ah arki waayaan, waxay kuu tuurayaan sida baradho kulul. Dhammaan ma xuma, in kastoo. Waad soo kaban kartaa. Sawirka kore waa macmiil dhab ah oo naga mid ah oo lumiyay in kabadan 50% dhammaan taraafikada raadinta dabiiciga ah, kombiyuutarrada, iyo ugu dambeyn ganacsi cusub. Waxaan siinnay a Qorshaha socdaalka SEO loogu talagalay xiriiriyeyaasha laakiin waa la iska indhatiray sii-deynta barta cusub oo ah mudnaanta ugu sareysa.
Mudnaantaas ayaa la beddelay.
Shirkaddu waxay gashay kumanaan meelood oo cinwaanno ah oo loogu talagalay server-kooda. Dhowr usbuuc ka dib, Google ayaa tixgelisay oo dib ugu celisay meeshii ay joogeen. Ma ahayn cabsi la’aan badan iyo habeenno hurdo la'aan ah oo ay kooxda qabeen, in kastoo. Anshaxa sheekada halkan waa in la dhiso bog cusub oo leh qaabab xiriiriye cusub waxay noqon kartaa istiraatiijiyad fantastik ah (SEO wiilasha mararka qaarkood way ku doodi doonaan taas ilaa dhimashada) sababtoo ah beddelaadaha kordhay ee aad la kulmi karto. Laakiin, laakiin, laakiin… hubi inaad 301 dib u rogayso dhammaan xiriiriyeyaashaada.
Weli waad waayi doontaa tirintaada bulshada. Waxaan tijaabineynaa qaabab aan xitaa ku joojin karno taas inay dhacdo halka aan ku hayno qaab dhismeedka isku xirka waxyaabaha hore iyo ka dib markaa cusbooneysiinta qaab-dhismeedka waxyaabaha cusub. Waxay noqon doontaa madadaalo!
Sanduuqa Ayaa Fududeynaya Wadaagista Faylka